भारतमा मोबाइल फोनमा चलाइने डाटाको मूल्य घटेर न्यून विन्दुमा पुगेको छ। बीबीसीको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार भारतमा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको मूल्य विश्वकै सबैभन्दा सस्तो छ। त्यो कसरी सम्भव भयो भन्नेबारे प्रविधि विश्लेषक प्रसान्तो के रोयको आलेख। मूल्यहरूको तुलना गर्ने ब्रिटेनस्थित एउटा वेबसाइटलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले आफ्नो रिपोर्टमा जनाएअनुसार भारतमा एक जीबी मोबाइल डेटाको ० दशमलव २६ अमेरिकी डलर पर्छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा १२ दशमलव ३७ डलर, ब्रिटेनमा…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्या आएको छ । फेसबुक र इन्स्टाग्राममा गए राती देखी समस्या आएको छ भने म्यासेञ्जरले पनि राम्रो काम गरेको छैन । फेसबुकमा स्टाटस वा तस्बिर राख्न नमिलेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् भने केही प्रयोगकर्ताका फेसबुक र इन्स्टाग्राम पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन् । प्रयोगकर्ताका अनुसार दुवै सामाजिक सञ्जालले ‘इरर’ म्यासेज देखाइरहेका र, ‘काम भइरहेको छ, चाँडै ठीक…विस्तृत समाचार »
फेसबुकले आफ्ना दुई अर्ब भन्दा धेरै प्रयोगकर्ताका डाटाहरुको बलमा आफ्ना विशाल विज्ञापन व्यवसाय स्थापित गरेको छ । तर फेसबुकको यहीँ विशाल डाटाबेस उसका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बन्नेवाला छ । गत बिहीबार यसको एउटा प्रष्ट संकेत देखा परेको छ । जर्मन सरकारले फेसबुकमाथि आफ्नो बजारको आधिपत्यलाई दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आफ्नो विज्ञापन बजारलाई मजबुत बनाउनका लागि आफ्ना अन्य सोसल मिडिया प्लाटफर्महरु र थर्ड पार्टी वेबसाइटहरुका डाटाहरु…विस्तृत समाचार »
भूगोल र जनसंख्यामा सानो तर प्रविधिको प्रयोगमा विश्वमै अब्बल, जान्नुहोस् एस्टोनियाका केही तथ्य
एस्टोनिया उत्तरी यूरोपमा पर्ने एउटा देश हो । यसको सीमा उत्तरमा फिनल्याडंको खाडि, पश्चिममा बाल्टिक सागर, दक्षिणमा लातविया र पूर्वमा रुससंग जोडिएको छ । यो देशमा समशीतोष्ण जलवायू पाइन्छ । एस्टोनियामा लोकतांत्रिक संसदिय प्रणाली छ र यो १५ राज्यमा विभाजित छ । यो देशको राजधानी ट्यालिन्न हो जुन एस्टोनियाको शहरहरु मध्यकै ठुलो शहर हो । यो देशमा जम्मा १.४ करोड जनसंख्या रहेको छ । यो…विस्तृत समाचार »
फेसबुकले थप्यो नयाँ फिचर, दश मिनेटभित्र म्यासेज डिलेट गर्न सकिने
काठमाडौं । फेसबुकले नयाँ फिचर थपेको छ । मंगलबारदेखि फेसबुकले म्यासेज डिलेट फिचर प्रदान गरेको हो।अब फेसबुक प्रयोगकर्ताले म्यासेन्जरमा पठाएको म्यासजे डिलेट गर्न सक्नेछन् । यसकालागि दश मिनेट भित्र डिलेट गर्नु पर्ने छ । गत जनवरीमा फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले यस फिचर ल्याउने बताएका थिए। कसरी गर्ने म्यासेज डिलेट फेसबुकमा जोडिएका कसैको म्यासेज बक्समा आफूलाई नरुच्ने खालको म्यासेज गए। त्यस म्यासेज तपाईले दश मिनेट भित्र…विस्तृत समाचार »
​‘आई लभ यू’ विश्वकै खतरनाक भाइरस, अरु कुन–कुन् छन् जानिराख्नुस्
४ माघ, काठमाडौं । कम्प्युटर/ल्यापटपमा भाइरस छिरेर सताइने धेरै हुनुहुन्छ होला । भाइरसका कारणले कम्प्युटर नै क्र्यास हुने सम्भावना हुन्छ । विश्वका खतरनाक भाइरसबारे तपाईंलाई कति थाहा छ ? यी हुन् विश्वकै खतरनाक भाइरस । आई लभ यू (I Love You) सन् २००० मा आएको यो भाइरस इमेलका माध्यमबाट फैलिन्छ । यसको सब्जेक्ट लाइन (Subject line) ‘आई लभ यू’ हुन्छ र फाइलको ’लभ लेटर फर…विस्तृत समाचार »
अनलाइनबाट पहिलो पटक किनबेच भएको वस्तु हो ‘गाँजा’, जान्नुस् इन्टरनेटका बारेमा रोचक तथ्य
टेलिफोनलाई पाँच करोड मानिसकाबिचमा पुग्न ७५ वर्ष, रेडियोलाई ३८ वर्ष, टेलिभिजनलाई १३ वर्ष लागेको थियो भने इन्टरनेट मात्र ४ वर्षमा पुग्न सफल भयो । अहिले तपाई हामीले यो पढ्न पाउनुको कारण पनि इन्टरनेट नै हो । १. जनवरी २०१८ को तथ्यांक अनुसार, ३ अर्व ८१ करोड २५ लाख ६४ हजार चार सय ५० डिवाइस इन्टरनेट संग जोडिएको छ । जसमा सबै भन्दा धेरै चीनमा रहेको…विस्तृत समाचार »
एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता धेरै ईमान्दार,आइफोन प्रयोगकर्ता चाहीँ जवान अनि खुला विचारका !
हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोन हाम्रो पहिचानको हिस्सा बनिसकेको छ। हामी मध्ये धेरैले प्रत्येक दिन कम्तीमा पाँच घण्टाभन्दा बढी त्यस्ता उपकरणसँग समय बिताउने गर्छौँ। तर यी स्मार्टफोनले हामी को हौँ भन्ने बारे के भन्छन् ? युनिभर्सिटी अफ लिङ्कन र ल्यांकस्टर युनिभर्सिटी का शोधकर्ताको एक समूह ले ५०० भन्दा बढी एन्ड्रोइड र आइफोन प्रयोगकर्ता र उनीहरूको स्मार्टफोन प्रतिको दृष्टिकोण नियालेका थिए। तपाईँको व्यक्तित्व र स्मार्टफोन बिचको सम्बन्ध…विस्तृत समाचार »
'फेसबुकबाट प्रेम नगर्नुस्'
७ पुस, मुम्बई । फेसबुकबाट प्रेम नगर्नुस्, अन्यथा मैलेजस्तो दुःख पाउनुपर्ला, पाकिस्तानी जेलमा ६ बर्ष जीवन बिताई यसै साता स्वदेश फर्किएका एक भारतीय नागरिकले शुक्रबार भने । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउने क्रममा एक किशोरीसँग प्रेममा परेपछि हमिद नेहाल अन्सारी पाकिस्तान पुगे । सन् २०१२ मा अन्सारी ती किशोरीले दिएको ठेगाना पछ्याउँदै पाकिस्तानमा पुगे । उनी किशोरीको घरमा पुग्दा नजिकै तैनाथ पाकिस्तानी प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरे…विस्तृत समाचार »
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मानिसका लागि कति फाइदा कति हानिकारक ?
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्प्युटरद्वारा नियन्त्रित रोबोट वा मानिसको जस्तै इन्टेलिजेन्स तरिकाले सोच्ने सफ्टवेयर बनाउने विधि हो । आर्टि्फिसियल इन्टेलिजेन्स शब्दको पहिलो प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक जाने म्याकार्थीले सन् १९५५ मा एउटा लेखमार्फत गरेका थिए । यसले मानिसको दिमागले कसरी सोच्छ ? कसरी समस्या हल गर्छ ? कसरी निर्णय लिन्छ ? कसरी काम गर्छ ? जस्ता विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्छ । यसको आरम्भ १९५० को दशकमै भएको थियो, तर यसको…विस्तृत समाचार »